Suuqgeynta Badeecada: Qaab-dhismeedka Khibrad Feedhka | Martech Zone
Suuqgeynta Badeecada: Qaab-dhismeedka Khibrad Fashilmay
Axad, Disembar 24, 2017 Douglas Karr
Qaar idinka mid ah ayaa indhaha idinka rogi kara arrintan, laakiin markii iigu horreysay ee aan runtii arko baakad alaabeed la yaab leh waxay ahayd markii saaxiib wanaagsan uu ii soo iibsaday AppleTV. Waxay ahayd aaladdii ugu horreysay ee Apple ee aan abid helo waanaya aragnimadu waxay u badan tahay inay igu hoggaamisay daraasiin badeecooyin Apple ah oo aan hadda haysto. Mid ka mid ah waayo-aragnimooyinka cajiibka ah ee sanduuqa ayaa ahaa MacBook Pro-kii iigu horreeyay. Sanduuqa ayaa gabi ahaanba hagaagsanaa oo MacBookgu wuxuu u taagnaa si qumman markii aad dib ugu laabatay baakadka si aad u aragto. Waxay u muuqatay oo dareentay mid gaar ah… aad u badan sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan helo MacBook Pro cusub dhowrkii sanoba mar (Waqtigeygaa waqtigeyga ah).
Tan waxaan ugala hadlayaa laptop aan iibsaday sanadkii hore. Ma ahayn kumbuyuutar Laptop Windows ah oo aan qaali ahayn laakiin waxaan si yaab leh ula yaabay markay soo saareen. Waxaa lagu soo duubay kartoon cad oo bunni ah oo powerupply-ka ah waxaa lagu duubay boorso waxaana lagu xiiray sanduuq cad oo dhuuban. Intuu laptop-ka qurxoonaa, sanduuqii sanduuqa waxba ugama tagin male-awaalka. Waxay ahayd daacadnimo niyad jab leh. Kaaga darane, waxay iga dhigtay inaan isweydiiyo in shirkada ka dambeysa laptop-ka ay runti raadineyso inay i cajabiso ama kaliya dhowr keyd ah ku keydiso baakadka.
Macaamiisha maanta way ka go'een khibrada wax iibsiga waxayna ka sii fogaanayaan ku qanacsanaanta isla markiiba la dareemay markay wax ka iibsanayaan dukaanka. Tani waa sababta diirada loo saarayo meelaha harsan ee sumcaddaada soo gaadhista macaamiisha waa in mudnaanta la siiyaa. Ku habeynta khibrada sanduuqa waa inaan la iska indhatirin marka la tixgelinayo saameynta ay ku leedahay qanacsanaanta macaamiisha guud ahaan. Jake Rheude, Fulinta Cawl-Cas
Waxaan u qorsheynay xoogaa gelin ah macaamiisheenna si loogu daro wax soo saarkooda ecommerce sannadihii la soo dhaafay. Mid ka mid ah wuxuu ahaa kaar mahadsanid fudud oo sicir-dhimis la raaci karo u horseedaya sii-hayn wanaagsan. Mid kale wuxuu ahaa kaar wadaag wadaag bulsheed oo ay ku yaalliin dhammaan xisaabaadka bulshada ee shirkadda iyo hashtag lagu wadaago sawir amarka khadka tooska ah. Markasta oo macaamilku la wadaago amarkooda, shirkaddu waxay ku wadaagtaa iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada. Waxay ahayd waddo fiican oo lagu aqoonsado macaamiishooda internetka iyo sidoo kale in la helo wadaagis bulsheed si loo soo jiito macaamiisha cusub.
Taasi waa mid ka mid ah meelaha diirada la saaray Fulinta Cawl-Cas ayaa la wadaagay sidii ugu fiicnayd ee ugu habboon ee ay infographic, Anatomy ee Khibradda Sanduuqa Boqorada. Khubaradu waxay falanqeeyeen waxa soo saara saamaynta ugu badan ee macaamiisha, oo ay ku jiraan:
Box The - naqshadda sanduuqa bannaanka, cajaladda wax lagu duubo, iyo sanduuqa gudaha.
Filler iyo Qalabka wax lagu Rakibay - warqad nudaha calaamadeysan, warqad jarjaran, iyo qalabka wax lagu xiro ee barkinta leh.
Soo bandhigidda alaabta - muujinta sheyga ugu muhiimsan iyo qarinta agabyada iyo dukumintiyada.
Sare iyo Dheeri - bixinta tijaabo bilaash ah, oo ay ku jiraan calaamadda celinta, iyo dhiirrigelinta wadaagista bulshada.
Ahmiyada Goobaha - ku dar qoraal shaqsiyeed, iyo alaab suuq geyn ah oo xayaysiisa badeecadaha iyo dallacsiinta kale ee khuseysa.
Faahfaahinta faahfaahinta mid kasta oo ka mid ah waxay bixisaa talo dheeraad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka caadiga ah, oo ay ku jiraan sanduuqyada cabbirka badan, looska xumbada, baakadaha adag, iyo cajalad daciif ah.
Tags: dhammaystirkawaayo-aragnimo wax soo saarkasuuq geynta badeecadaFulinta Cawl-Casunboxing
'Tis the Season…' oo loo yaqaan 'Benchmark' oo looga soo horjeedo Isbeddellada Xilliyeed